Ninka ugu da'da wayn dunida oo Sigaar cabidda joojinaya - BBC News Somali
Ninka ugu da'da wayn dunida oo Sigaar cabidda joojinaya
29 Maajo 2018
Image caption Fredie Blom
Fredie Blom wuxuu noolashiisa inta badan ahaa shaqaale ka howlgali jiray beero iyo warshadaha dhismaha xilligii midabtakoorka dalka Koonfur Afrika, dhawaan waxaa laga yaaba in loo aqoonsado ninka ugu da'da wayn dunida, sida uu kusoo warramaya wariyaha BBC-da Maxamed Cali oo ku sugan magaalada Cape Town.
Inkastoo uu joojiyay cabidda khamriga sanado badan ka hor , Fredie Blom weli wuxuu aad u cabbaa Sigaarka.
Wuxuu yiri "Maalin kasta waxaan dhuuqaa labo ilaa saddex xabbo oo Tubaako ah, waxaana samaystaa Tubaako ii gaar ah ma cabo Sigaarka caadiga ah"
Fredie wuxuu sidoo kale sheegay in dadku ay ugu baaqaan inuu duuqo Sigaarka culus.
Wuxuu intaasi ku daray in mararka qaar uu naftiisa been u sheegaya oo ah in Cabidda Tubaakada uu joojin doono balse ay caado u noqotay.
Isagoo kaftamaya ninkan 114 sano jirka ah ayaa yiri " waxaan eedeyn dusha uga ridaya Shayddaanka sababtoo ah waa midka igu riixay arrintani"
Marka aad la kulantid Fredie Blom waxa ugu horreeyo aad jirkiisa ka dheehan kartid ayaa ah qaab dhismeedka wanaagsan ee jirkiisa iyo caafimaadkiisa.
Waa nin dheer oo xoog leh, cidna aanu caawinaynin marka uu socda.
Beeralaygan hore ayaa 8 bishan May 114 sana jirsaday, waxaana la sheegay inuu yahay qofka ugu da'da wayn dunida inkastoo aysan xaqiijinin waaxda diiwaanka dadka ugu da'da ee dunida.
Diiwaanka dadka ugu da'da dunida waxaa haystay haweeney reer Jamaican oo lagu magacaabo Violet Moss-Brown oo sanadkii 2015-kii ku geeriyootay da'da 117.
Lahaanshaha sawirka Fredie Blom
Image caption Fredie Blom wuxuu dhashay sanadkii 1904-tii
Blom wuxuu yiri " Caafimaadkaygu wuu wanaagsan yahay, wadnahaygu awood ayuu leeyahay balse lugahayga way sii tabar dhigayaan, uma socon kara sidii ahaan jiray xilli hore"
Wuxuu caan ka noday dalkaasi Koonfur Afrika, dadka maxalliga iyo hoggaamiyeyaasha dowladda ayaa ku booqday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Cape Town, Tusaale ahaan mar uu xusaayay dhalashadiisa waxaa haddiyad u keenay mas'uuliyiin ka socotay laanta horumarinta dowladda ee gobolka.
Wuxuu shaqayn jiray Siddeetamaadkii
Xaaska Blom, Janetta oo Siddeetamaadkii jirtay 48 sano isagana uu ka waynaa 29 sana waxay sheegtay in saygeedu uu inta badan lahaa caafimad, muddo laga joogo sannoyin ayuu hal mar ah aaday isbitaal markaasoo jilibka laga qabtay.
Waxya shaaca ka qaaday in dad badan ay shaki geliyeen da'da saygeeda.
Sihle Ngobese oo ah afahayeenka waaxda horumarinta ee galbeedka Cape Town ayaa sheegay in dowladda ay guddoonsiisay Blom sharciga aqoonsiga 8-dii bishii May sanadkii 1904-tii oo ka dhigan inuu dhashay sanadkaasi.
Image caption Fredie Blom wuxuu yaraantiisa ugaarsan jiray shimbiraha
Isagoo yar ayuu kasoo tagey Blom xaafaddii uu ka dhashay ee Adelaide oo ku taalla Bariga magaalada Cape town, Iskuulna ma uusan aadin waxna ma qori kara mana akhrin kara.
Mar uu soo xasuusanayay dhacdooyinkii uu yaraantiisa soo maray, wuxuu yiri " marka aan subixii hurdada ka kaca waxaan ugaarsan jiray Shimibiraha anigoo adeegsanaya Waraf oo markaasi aan xirfad u laha shiishka Shimbiraha"
Shaqadiisii ugu horreysaya waxay ahayd shaqaale beer ku taalla dalkaasi kaddibna wuxuu u wareegay shirkad ka shaqaysa dhismaha.
Wuxuu yiri Blom " Waxaan maray guud ahaan magaalada Cape Town anigoo ka shaqaynaya dhismayaal, halkaasi waxaa ka shaqaynayay ilaa an howlgab ka noqaday xilliggaasi oo ay hayd siddeetamaadkii"
Koonfur Afrika oo dib u noqotay waddanka ugu dhaqaalaha wayn Afrika
Libaax gool ah oo haweenay ku dishay Koonfur Afrika
Image caption Fredie Blom iyo xaaskiisa Janetta
Wuxuu sheegay in xaaladda ay isbeddashay, dambiyada hadda la gaysnaya aysan waggaasi dhici jirin islamarkaasna ku noqotay isbddalladii waynaa uu noloshiisa uu abid arko.
" Nabadgelyo ayaa jirtay, xilli wanaagsan ayay ahayd, dil iyo burcadnimo ma jirin, qof in waxyeello loo gaystana ma dhici jirin"
Xaaskiisa waxay sheegtay in Blom uusan cunini cunnooyin gaar ah, wuxuu jecelyahay hilibka iyo khudaarta.
Blom weli xoog ayuu u leeyahay dhaqidda Weelasha iyo inuu labisto.